Ha walwalin waalidkaa; Wadankaaga ha ka tagin!!! – Hope Generation – جيل الأمل
Ha walwalin waalidkaa; Wadankaaga ha ka tagin!!!
Waxaa mar kale dib u bilowday ololihii ka hortagga Tahriibka oo in muddo ah ba aan soo wadnay. Tahriibku waa dhibaato, waa udhaxee dhimasho iyo nolal, waa magafe oo ku garacaa kuna iibsada sidii xoolihii, waa baddii madoobeed ku dhac oo ku dhimo, waa yurub tag oo sharci ka waa kadibna kaniisa seexo kaadina cab.
Intaas iyo in kabadan waa dhibaatooyinka ay la kulmayaan tahriibayaasha, iyadoo taa laga ambaqaadayo waxaa Hope Generation u suuta gashay inay sanadkii 2-aad oo xiriix ah qabato ol’ole looga hortagayo in ay da’ yartu tahriibaan.
Iskuulada iyo Jaamacaduhu waa halka ay ku sheekeystaan dhalinyaraddu kana qorsheeyaan safarka dheer ee dhimashadda. iyadoo halkaa laga amba qaadayo ayaan booqanay iskuulka Yusuf Alkowneyn Secondary school oo ku yaala Degmadda Wadajir Magaaladda Muqdisho.
Wacyi’galin ku haboon ayuu ka jeediyey mahadi ha ka gaadhee Mudane Axmed Sh Cabdullaahi (Maadka). Dhalinyaraddu waxay u baahan yihiin Waayeel wax u sheega.